Cele Platform - Page 724 Of 756 - Media And Entertainment
October 18, 2018 Cele Platform 0
သရုပ်ဆောင် ဆုမြတ်နိုးဦးဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ သတင်းစာစောင် တစ်ခုမှာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အဓိကထားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ အင်တာဗျူးစာမျက်နှာအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေတဆင့် ရရှိလာတဲ့ ဗဟုသုတတွေကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဆုမြတ်နိုးဦးဟာ ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြန့်ဝေတဲ့ သတင်းစာစောင်တစ်ခုမှာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အဓိကထား တဲ့ ကဏ္ဍကနေ ရွေးချယ်ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ […]
အဆိုတော် မိုးမိုးတစ်ယောက် သူ့ရဲ့သမီးလေး မိုးအိပ်မက်လွှာအကြောင်းတွေ ပြောပြလာပါတယ်။ သမီးလေးက အဖေ အနား ကပ်လွန်းလို့ ဘယ်သူမှတောင် ခေါ်လို့ မရဘူးလို့ သူကဆိုပါတယ်။ ” အဖေပေါ်မှာဆို ပြုံးလို့ပျော်လို့ ဘယ်သူမှ ခေါ်လို့လဲမရတော့ဘူး။ တဖြည်းဖြည်းပိုသိလာလေ အဖေ ပိုကပ်လေပဲ ။ မောင်မိုးမိုး သာဒီးလူ ပြီလေ(ကျွန်တော်ရူးနေသည်ပေါ့)” […]
အမြဲတမ်းရိုးရိုးလေးနဲ့ပဲ လှလွန်းတဲ့ မခိုင်လေးတစ်ယောက် ရွှေနန်းတော်ရဲ့ 7ဆိုင်မြောက် ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ပုံစံလေးကတော့ တကယ့်ကိုအလန်းစားပါပဲ။ ခရမ်းရောင်ကတ္တီပါသားအစကို ကိုယ်ကျပ်ရင်ဟိုက်ပုံစံလေးချုပ်ဝတ်ထားပြီး ဆံပင်တွေကိုအားလုံးစုသိမ်းထားတဲ့ပုံစံလေးက တကယ်ကိုရင်ခုန်ချင်စရာပါပဲ။ အသက်လေးဆယ်အရွယ်အမျိုးသမီးလို့တောင်မထင်ရလောက်အောင် သူမရဲ့နုပျိုမှုက အံ့မခန်းပါပဲ။ ချစ်စဖွယ်သမီးလေး စံထိပ်ထားဦးဟာဆိုရင်လည်း အသက်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ခြေရာကိုအပြည့်အဝနင်းမယ့် သမီးလေးဖြစ်တာကြောင့် ကြော်ငြာလေးတွေလည်းရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2016 […]
မော်ဒယ် မင်းသမီးချောလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ စောယုနန္ဒာနဲ့ ဧငြိမ်းဖြူတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကတော့ ယခုဆိုရင် ချစ်ရတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့အတူ ငွေဆောင်ကမ်းခြေကို အပန်းဖြေရင်း အပျော်ခရီးရောက်ရှိနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင် ချစ်စရာမျက်နှာလေးတွေနဲ့ လှပအချိုးကျပြီး စမတ်ကျတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိခဲ့တာကြောင့် ပုရိသတ်တွေကြားလူကြိုက်များပြီးရေပန်းစားနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စောယုနန္ဒာနဲ့ ဧငြိမ်းဖြူတို့ […]
ယာဉ်​မ​တော်​တဆဖြစ်​ပွားပြီး ​ကျောက်​ဂူဆရာ​တော်​ ပျံလွန်​​တော်​မူ
အောက်တိုဘာလ(၁၈)ရက်နေ့နံနက်(၀၉ ၁၀) နာရီ ချိန်. နပတ-မတလ လမ်း မိုင်တိုင် ၃၁၀/၃- ၃၁၀/ ၄ဖာလုံးကြား 1p/7779. Lexus အနက်ရောင် ကျောက်ဂူဆရာတော်ပါ ယာဉ်သည် အရှိန်မထိန်နိုင်ဘဲ လမ်းဘေးမြေသားတောင်စောင်းဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ယာဉ်ပေါ် ကျား ၄ဦး အနက် ၁ဦးသေ ဆုံး […]
နေရာက မန်းလေးမြို့ အချိန်က ည ၉နာရီခွဲ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက အံ့သြမှင်သက်စရာမြင်ကွင်း
အချိန်က ည ၉ နာရီခွဲခါနီး။ မန္တလေးမြို့ရဲ့ အထင်ကရလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ ကားကိုဖြေးဖြေးမှန်မှန်မောင်းလာရင်း ကားရှေ့ လမ်းမီးရောင်အောက်မှာ ကိုယ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုကို ကြည့်ပြီး အံ့အားသင့်မိတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ဘာကွာလတီမှမပါပဲ ထုတ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်အစုတ်ပေါ်မှာ ဧရာမအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်။ ထိုအထုပ်ရဲ့အပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်ထိုင်လို့ ။ ကိုယ်တေ်ာ်တော်လေး အံ့သြတကြီးကိုငေးကြည့်မိတယ်။ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်များလိုက်သလဲ။ ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ […]
လာပြန်​ပြီး​နော်​ ​တောင်​ကြီးကSolarကား​နောက်​ထပ်​တစီး… Congratulations ပါဗျာ…. * * * အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ယူမည့် SOLAR ကားလေး * * * နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) MECHANICAL ဌာနမှ ဘွဲ့ယူ ကျမ်း အတွက် Solar ကားလေး ကို တင်သွင်း […]
အရင်က Online မှာ ဖင်တပြပြနဲ့ ဓာတ်ပုံတင်တဲ့ မော်ဒယ်ယောင်ယောင်တွေ မော်မဒယ် တဒယ် တွေ တွေ့ရင် အံသြမိတယ် ၊ ဒီမိန်းမတွေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဒီဖင်ကြီးပဲ ဘာလို့ ပြပြနေလည်းပေါ့ ၊😕 တစ်ခါတလေ ဆို ဖင်အတုလား အစစ်လား အငြင်းပွားမှုတွေလည်း နေ့တဓူဝ ဖြစ်ကြ […]
စည်သူဝင်းနဲ့ ပိုးကြာဖြူခင် တို့ကတော့ “မိုးကောင်းကင် အိပ်မက်” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ကိုရဲနဲ့ ဆိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ပိုပိုတိုးလို့ ရရှိလာတဲ့ အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုချက်တွေကတော့ အရမ်းကို လိုက်ဖက်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေ သဘောတူထားကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးကြာဖြူခင်နဲ့ စည်သူဝင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ […]
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ သူမရဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို ရရှိထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်တွေကို အမြဲတင်ပေးလေ့ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း သူမကို အားပေးချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် […]
« 1 … 723 724 725 … 756 »